मत्ती २३ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद
२३ तब येशूले भीड र आफ्ना चेलाहरूसित कुरा गर्दै यसो भन्नुभयो: २ “शास्त्री र फरिसीहरूले आफैलाई मोशाको व्यवस्थाको शिक्षक बनाएका छन्‌। ३ यसकारण तिनीहरूले तिमीहरूलाई जे-जे भन्छन्‌, ती सबै गर तर तिनीहरूले गरेजस्तै चाहिं नगर किनभने तिनीहरू भन्न त भन्छन्‌ तर गर्दैनन्‌। ४ तिनीहरू बोझिला नियमहरूको भारी मानिसहरूको काँधमा राखिदिन्छन्‌ तर तिनीहरू आफै भने एउटा औंलाले पनि ती उठाउने मन गर्दैनन्‌। ५ तिनीहरू जे-जति गर्छन्‌, ती सब मानिसहरूले देखून्‌ भनेर गर्छन्‌, किनकि तिनीहरू आफ्ना जन्तर* ठूलठूला बनाउँछन्‌ अनि आफ्ना लुगाको झुम्का लामा-लामा पार्छन्‌। ६ तिनीहरू रात्रि-भोजहरूमा मुख्य-मुख्य आसन खोज्छन्‌, सभाघरहरूमा सबैभन्दा अगाडि बस्न रुचाउँछन्‌, ७ बजारहरूमा विशेष अभिवादन चाहन्छन्‌ अनि मानिसहरूले रब्बी* भनेर बोलाएको मन पराउँछन्‌। ८ तर तिमीहरू भने आफूलाई रब्बी भन्न नलगाओ, किनकि तिमीहरूको गुरु एकै जना हुनुहुन्छ र तिमीहरूचाहिं सबै दाजुभाइ हौ। ९ साथै, तिमीहरू पृथ्वीमा कसैलाई पिता* नभन, किनकि तिमीहरूका पिता एकै जना हुनुहुन्छ, जो स्वर्गमा बस्नुहुन्छ। १० न त कसैले तिमीहरूलाई ‘नेता’ भनोस्, किनकि तिमीहरूका नेता एकै जना हुनुहुन्छ, जो ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। ११ तर तिमीहरूमाझ जो सबैभन्दा ठूलो हो, ऊ तिमीहरूको सेवक बनोस्। १२ जसले आफूलाई उचाल्छ, ऊ होच्याइनेछ अनि जसले आफूलाई होच्याउँछ, ऊ उचालिनेछ। १३ “धिक्कार छ तिमीहरूलाई, ए कपटी शास्त्री र फरिसीहरू हो! किनकि तिमीहरू मानिसहरू नपसून्‌ भनेर स्वर्गको राज्यको ढोका बन्द गरिदिन्छौ। तिमीहरू न आफू पस्छौ न त पस्न खोज्नेहरूलाई नै भित्र छिर्न दिन्छौ। १४ * — १५ “धिक्कार छ तिमीहरूलाई, ए कपटी शास्त्री र फरिसीहरू हो! किनकि तिमीहरू कोही एक जनालाई आफ्नो मतमा* ल्याउन समुद्र-समुद्र र पाखा-पाखा चाहार्छौ अनि जब ऊ तिमीहरूको मतमा आउँछ तब तिमीहरू उसलाई आफूभन्दा दोब्बर गेहेन्नाको* योग्य बनाउँछौ। १६ “धिक्कार छ तिमीहरूलाई, ए अन्धा अगुवाहरू हो! किनकि तिमीहरू भन्छौ: ‘यदि कसैले मन्दिरको कसम खान्छ भने त्यो केही होइन तर कसैले मन्दिरको सुनको कसम खान्छ भने उसले त्यो पूरा गर्नै पर्छ।’ १७ ए मूर्ख र अन्धाहरू हो! वास्तवमा कुनचाहिं महत्त्वपूर्ण हो, सुन कि सुनलाई पवित्र तुल्याउने मन्दिर? १८ साथै, तिमीहरू यसो पनि भन्छौ: ‘यदि कसैले वेदीको कसम खान्छ भने त्यो केही होइन तर कसैले वेदीमाथि राखिएको भेटीको कसम खान्छ भने उसले त्यो पूरा गर्नै पर्छ।’ १९ अन्धाहरू हो! वास्तवमा कुनचाहिं महत्त्वपूर्ण हो, भेटी कि भेटीलाई पवित्र तुल्याउने वेदी? २० त्यसकारण जसले वेदीको कसम खान्छ, उसले वेदी र त्यसमाथि राखिएका सबै थोकको कसम खान्छ; २१ अनि जसले मन्दिरको कसम खान्छ, उसले मन्दिर र मन्दिरमा बास गर्नेको कसम खान्छ। २२ अनि जसले स्वर्गको कसम खान्छ, उसले परमेश्वरको सिंहासन र त्यसमा बस्नुहुनेको कसम खान्छ। २३ “धिक्कार छ तिमीहरूलाई, ए कपटी शास्त्री र फरिसीहरू हो! किनकि तिमीहरू पुदिना, सुप र जीराको दशांश चढाउँछौ तर न्याय, कृपा र विश्वासीपन जस्ता व्यवस्थाका गहकिला कुराहरूलाई चाहिं वास्तै गर्दैनौ। तिमीहरूले ती कुराहरू चढाउनुका साथै यी कुराहरूलाई पनि लत्त्याउनु हुँदैनथ्यो। २४ अन्धा अगुवाहरू हो! तिमीहरू भुसुना चाल्छौ तर उँटलाई चाहिं निलिहाल्छौ! २५ “धिक्कार छ तिमीहरूलाई, ए कपटी शास्त्री र फरिसीहरू हो! किनकि तिमीहरू कचौरा र थालको बाहिरचाहिं माझ्छौ तर त्यसको भित्र भने लुट र ऐयासीले भरिएको हुन्छ। २६ ए अन्धा फरिसी, पहिला कचौरा र थालको भित्रपट्टि माझ, तब त्यसको बाहिरपट्टि पनि सफा हुनेछ। २७ “धिक्कार छ तिमीहरूलाई, ए कपटी शास्त्री र फरिसीहरू हो! किनकि तिमीहरू कमेरो पोतेका चिहानहरूजस्तै छौ, जो बाहिरबाट हेर्दा साँच्चै सुन्दर देखिन्छन्‌ तर भित्र भने मरेका मानिसहरूको हाडखोड र हर प्रकारका अशुद्ध थोकहरूले भरिएका हुन्छन्‌। २८ यसरी नै तिमीहरू पनि बाहिरबाट हेर्दा मानिसहरूको अगाडि धर्मी देखिन्छौ तर भित्र भने तिमीहरू कपट र कुकर्मले भरिएका छौ। २९ “धिक्कार छ तिमीहरूलाई, ए कपटी शास्त्री र फरिसीहरू हो! किनकि तिमीहरू भविष्यवक्ताहरूको चिहान बनाउँछौ अनि परमेश्वरको स्तरबमोजिम असल काम गर्ने मानिसहरू गाडिएको ठाउँमा स्मारक बनाएर त्यसलाई सिङ्गार्छौ। ३० अनि तिमीहरू भन्छौ, ‘यदि हामी हाम्रा पितापुर्खाहरूको समयमा हुँदा हौं त, तिनीहरूले भविष्यवक्ताहरूको हत्या गर्दा हामी त्यसमा सामेल हुने थिएनौं।’ ३१ यसकारण तिमीहरू भविष्यवक्ताहरूको हत्या गर्नेहरूका सन्तान हौ भनी तिमीहरू आफैले साक्षी दिंदैछौ। ३२ त्यसैले अब तिमीहरूका पितापुर्खाहरूको पापको घैंटो भरिदेओ। ३३ “ए विषालु सर्पका सन्तानहरू हो, तिमीहरू गेहेन्नाको इन्साफबाट कसरी उम्कौला? ३४ यसकारण म तिमीहरूकहाँ भविष्यवक्ता, बुद्धिमान्‌ मानिस र शिक्षकहरू पठाउँदैछु। तिनीहरूमध्ये केहीलाई तिमीहरूले मार्नेछौ, केहीलाई काठमा टाँग्नेछौ अनि केहीलाई तिमीहरूले आफ्ना सभाघरहरूमा कोर्रा लगाउनेछौ र केहीलाई चाहिं सहर-सहरमा खेदो गर्नेछौ; ३५ परमेश्वरको स्तरबमोजिम असल काम गर्ने मानिसहरूमध्ये पृथ्वीमा ज-जसको रगत बगाइयो ती सबैको दोष तिमीहरूमाथि आइपरोस्, असल मानिस हाबिलदेखि बरखियाको छोरा जकरियाको रगतसम्म, जसको तिमीहरूले मन्दिर र वेदीको बीचमा हत्या गरेका थियौ। ३६ म तिमीहरूलाई साँचो-साँचो भन्छु, यी सब यस पुस्तामाथि आइपर्नेछ। ३७ “यरूशलेम, हे यरूशलेम, तँ जसले भविष्यवक्ताहरूलाई मारिस् र आफूकहाँ पठाइएकाहरूलाई ढुङ्गाले हानिस्! कुखुरीले आफ्ना चल्लाहरूलाई पखेटामुनि बटुलेझैं मैले तेरा छोराछोरीहरूलाई कत्ति पटक बटुल्न चाहें! तर तिमीहरूले मानेनौ। ३८ हेर, परमेश्वरले तिमीहरूको घरलाई त्याग्नुहुनेछ। ३९ किनकि म तिमीहरूलाई भन्छु, तिमीहरूले अबदेखि मलाई कुनै पनि हालतमा देख्नेछैनौ, जबसम्म तिमीहरू यसो भन्दैनौ: ‘यहोवाको नाममा आउने धन्यका हुन्‌!’ ”
^ मत्ती २३:५ * धर्मशास्त्रका केही अंशहरू लेखेर राखिने सानो बट्टा। आफूमाथि कुनै अनिष्ट कुरा आइनपरोस् भनेर यहूदी पुरुषहरू यसलाई आफ्नो निधार र देब्रे पाखुरामा बाँध्ने गर्थे।
^ मत्ती २३:७ * आदर अनि सम्मानजनक उपाधि, जसको अर्थ हो “मेरो महान्‌; मेरो अति श्रेष्ठ।”
^ मत्ती २३:९ * येशूले औपचारिक वा धार्मिक उपाधिको रूपमा मानिसलाई “पिता” भनेर सम्बोधन गर्न मनाही गर्नुभएको हो।
^ मत्ती २३:१४ * कुनै-कुनै पुराना ग्रीक पाण्डुलिपिहरूमा पद चौध पाइँदैन; तर बाइबलका केही पाण्डुलिपिहरूमा भने यो पद पाइन्छ र त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ: “धिक्कार छ तिमीहरूलाई, ए कपटी शास्त्री र फरिसीहरू हो! किनकि तिमीहरू विधवाहरूका घर निल्छौ र लामो-लामो प्रार्थना गरिटोपल्छौ; यसकारण अरूले भन्दा तिमीहरूले धेरै दण्ड पाउनेछौ।”
^ मत्ती २३:१५ * वा, “धर्म परिवर्तन गराएर यहूदी मतमा।”
^ मत्ती २३:१५ * यरूशलेमबाहिर फोहरमैला जलाउने ठाउँ। अतिरिक्त लेख ९ हेर्नुहोस्।